Ruqsadda shaqada ee dalka oo ajaaniibta laga iibiyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ruqsadda shaqada ee dalka oo ajaaniibta laga iibiyo
La daabacay måndag 15 april 2013 kl 12.33
In la iibiyo goob-shaqo oo sabab u noqota inuu ruuxu helo xeerka deggenaansho ee dalka ayaan ah mid aan wax dhibaato ah kala soo gudboonaan shakhsiga falkaa ku tallaabsada, sida uu qoray war-geeyska SvD.
Sida laga soo xigtay ciidanka ammaanka iney dhabbooyin hor leh ey u furmeen dadyoowgii ka macaashi jirey iney tuuga-nimo dalka ku soo geliyaan dalka ajaaniibta, isla-markaana aan xeerka lala tiig-san karin madaama ey ka heleen daldaloollo.
Qiimaha ruqsadaha hoowlaha ayaa leh qiimo kala duwan. Wixii ka dambeeyay xeerkii ruqsadda shaqada oo hir-galay sannadkii 2008 ayaa shaaca laga qaadey xaalado dhowr ah ee la xiriirey dadyoow loo heley ruqsad shaqo ee loo isticmaaley qaabab aan wanaag-saneyn. Sida laga soo xigtay ciidanka ammaanka in ruqsadaha qaarkood ey joogaan qiime gaarsiisan 200 000 oo koron.
Daladloollo laga heley xeerka ayaa ugu wacan in aanay hayadaha ku shaqada lihi waxba ka qaban karin kolka ey ka war-helaan in ganacsi lagu galey ruqsadda shaqada. Iyadoona inta ay hayadda socdaalku aanay waxba ka qabin ruqsadda shaqada aan wax tallaabo ah laga qaadi karin shakhsiga ruqsadda iibiyay. Inuu go'aanka hayadda socdaalka ku saleeysnaa markiisii hore khalad ayaan xaaladdaa wax ka badlayn.
Mushaarooyinka la siiyo dadyoowgaa ayaa aad u hooseeya, halka dhanka kale qaarkood kolka mushaarka la siiyo ey markiiba dib gacanta uga saaraan cidda siisay, sida uu qoray war-geeysku.